Vaovao - mavitrika amin'ny indostria - maodely e-varotra "Meksika" modely "Ranomasina Manga"
Ny valanaretina dia nanova tanteraka ny fomba fizotry ny vahoaka meksikana. Na izy ireo aza dia tsy tia miantsena an-tserasera, na izany aza, rehefa nakatona ireo fivarotana dia manomboka manandrana sy mankafy miantsena an-tserasera sy fandefasana an-trano ny Meksikana.
Talohan'ny fanidiana lehibe noho ny COVID-19, ny e-varotra any Mexico dia niroso hatrany amin'ny firoboroboana avo lenta, miaraka amin'ny iray amin'ireo taha ambony indrindra amin'ny e-varotra manerantany. Araka ny voalazan'i Statista, tamin'ny taona 2020 dia efa ho 50% ny Meksikana no nivarotra an-tserasera, ary tao anatin'io valanaretina io dia nipoaka ny isan'ireo Meksikana miantsena an-tserasera ary antenaina hampiakatra ho 78% amin'ny 2025.
Ny fiantsenana miampita sisintany dia ampahany manandanja eo amin'ny tsenan'ny e-varotra mexico, miaraka amin'ny 68 isan-jaton'ny mpividy e-mailaka Meksikana miantsena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, hatramin'ny 25% amin'ny totalin'ny varotra. Araka ny fanadihadiana nataon'ny McKinsey Consultancy, 35 isan-jaton'ny mpanjifa no manantena fa hihatsara ny valanaretina hatramin'ny faran'ny faran'ny taona 2021 farafaharatsiny, ary hanohy hiantsena an-tserasera mandra-pahatapitry ny valanaretina izy ireo. Ny sasany mino fa na dia taorian'ny fipoahan'ny aretina aza dia mbola hisafidy ny hiantsena an-tserasera izy ireo satria lasa ampahany amin'ny fiainany izany. Voalaza fa ny fampitaovana ao an-trano dia lasa ifantohan'ny fiantsenana an-tserasera meksikana, miaraka amin'ny 60 isan-jaton'ny mpanjifa no mividy fanaka an-trano, toy ny kidoro, sofa ary lakozia. Manoloana ny valanaretina dia mitohy hatrany, hitohy ny fironana ao an-trano.
Ho fanampin'izany, ny lazan'ny haino aman-jery sosialy dia nitondra tombony ho an'ny fampandrosoana e-varotra any Mexico ihany koa, satria maro ny mpiantsena no mivezivezy mankamin'ny tranonkala miantsena amin'ny alàlan'ny sehatra media sosialy. Mandany efa ho adiny efatra isan'andro ao amin'ny media sosialy ny olom-pirenena Meksikana, miaraka amin'ny Facebook, Pinterest, Twitter ary ny hafa izay malaza indrindra amin'ny firenena.
Ny fanamby lehibe amin'ny e-varotra any Mexico dia ny fandoavana sy ny lojika, satria ny 47 isan-jaton'ny Meksikana ihany no manana kaonty any amin'ny banky ary tena miahiahy momba ny fiarovana ny kaonty ny Meksikana. Mikasika ny lozisialy, na dia manana rafitra fizarana matotra aza ireo orinasam-pitaovana ankehitriny, saingy miavaka manokana ny tanin'i Mexico, mba hahatratrarana ny fizarana “kilometatra farany”, be dia be ny gara no mila hatsangana.
Saingy voavaha ireo olana nanelingelina ny e-varotra any Mexico, ary mahatonga ny mpivarotra hazoto hanandrana ny mpivarotra. Azo vinavinaina mialoha fa amin'ny fisian'ny “ranomasina manga vaovao”, dia hitatra hatrany ny faritany e-varotra manerantany.